प्रेमी आफूले त बिहे गर्न मानेनन्, प्रेमिकाले अर्कैसँग बिहे गर्न लाग्दा समेत ब्ल्याकमेल गरेपछि – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/प्रेमी आफूले त बिहे गर्न मानेनन्, प्रेमिकाले अर्कैसँग बिहे गर्न लाग्दा समेत ब्ल्याकमेल गरेपछि
प्रेमी आफूले त बिहे गर्न मानेनन्, प्रेमिकाले अर्कैसँग बिहे गर्न लाग्दा समेत ब्ल्याकमेल गरेपछि
आफूले बिहे गर्न नमानेका प्रेमीले अरुसँग बिहे गर्न लाग्दा समेत ब्ल्याकमेल गरेर तनाव दिएपछि एक युवतीले प्राण त्यागेको खुलासा भएको छ । आइतबार झुण्डिएर मृत अवस्थामा भेटिएकी विराटनगर महानगरपालिका–३ मा बस्दै आएकी २४ वर्षकी श्वेताको मृत्यु आत्महत्या नभए ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’का कारण भएको खुलासा भएको हो ।
प्रहरीले श्वेतालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अभियोगमा उनका प्रेमी भनिएका मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–१० का २५ वर्षीय सविन पराजुलीलाई पक्राउ गरेको छ । सविनले बिहे गर्न नमानेपछि श्वेताको विवाह अर्कै युवकसँग तय गरिएको परिवारले जनाएको छ । तर, बिहे तय भएपछि नै सविनले श्वेतालाई विभिन्न धम्की दिँदै ब्ल्याकमेल गर्न थालेको पाइएको छ ।
सविन श्वेतासँग एउटै कलेजमा पढ्थे । उनहिरुको सम्बन्ध ३ वर्ष अघिदेखि रहेको अनुसन्धानमा पाइएको छ । सविनले विवाह गर्न नमानेपछि श्वेताको अन्यत्रै बिहे तय गरिएको थियो । बिहे असार १४ गतेका लागि तय थियो र सोमबार फूलमालाको कार्यक्रम थियो । त्यसको ठिक अघिल्लो दिन श्वेताले आत्महत्या गरिन् ।
अनुसन्धानमा श्वेताको बिहे तय भएपछि सविनले श्वेता र आफ्नो पुराना फोटोहरु सार्वजनिक गर्न थालेका थिए । ती फोटोहरु श्वेताले बिहे गर्न लागेका युवकले समेत देखेपछि उनले श्वेतासँग बिहे नै तोड्न समेत प्रस्ताव गरेका थिए । उता हुनेवाला पतिले बिहे तोड्न प्रस्ताव गर्ने र यता सविनले निरन्तर तनाव दिने भएपछि श्वेताले बाध्य भएर आत्महत्या गरेको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ । श्वेताकी बहिनी सरिताले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले सविनलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो । उनलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा चलाउन म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
”चीनतर्फको १२ नम्बर पिलर नयाँ बनाएको भेटियो, ने’पाल सरका’रलाई थाहा छैन की जन’तालाइ धो’का” ?
जाडोले थ’रथ’र का’म्दै दिनभरि ध’र्ना बस्छन, बे’लुका भो’कै सुत्छ’न् उखु किसान !
नि’भ्नै ला’गे क’न्चन; अ’न्ति’म अ’वस्था’मा उ’नलाई ए’कप’टक अ’वश्य हे’र्नुहो’ला (भिडियो सहित)